အီတလီအသင်း တတိယအကြိမ်မြောက် ချန်ပီယံဖြစ်ခဲ့တဲ့ ၁၉၈၂ ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲ
ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲ သမိုင်းကြောင်းများ အပိုင်း (၁၂)
22 Jun 2018 . 2:14 AM
အိမ်ရှင်အဖြစ် လက်ခံကျင်းပခွင့်ကို စပိန်နိုင်ငံက ရရှိခဲ့ပြီး နိုင်ငံတစ်ဝှမ်းရှိ ကွင်းပေါင်း (၁၇)ကွင်းမှာ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့လို့ ကမ္ဘာ့ဖလား သမိုင်းတစ်လျှောက် ကွင်းအများဆုံး ကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ ပြိုင်ပွဲအဖြစ် မှတ်တမ်းဝင်ခဲ့ပါတယ်။ ခြေစစ်ပွဲကို နိုင်ငံပေါင်း (၁၀၉)နိုင်ငံ ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ပြီး ပြိုင်ပွဲဝင် အသင်းအရေအတွက်ကိုလည်း (၁၆)သင်းကနေ (၂၄)သင်းကို ပြောင်းလဲကျင်းပခဲ့တယ်။ အကြိုဗိုလ်လုပွဲနဲ့ ဗိုလ်လုပွဲအဆင့်တွေမှာ ပယ်နယ်တီစနစ် စတင်ကျင့်သုံးဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့တဲ့ ပြိုင်ပွဲဖြစ်ခဲ့ပြီး အနောက်ဂျာမနီအသင်းနဲ့ ပြင်သစ်အသင်းတို့ရဲ့ ဆီမီးဖိုင်နယ်ပွဲစဉ်မှာ အချိန်ပို ပြီးဆုံးချိန်အထိ (၃-၃)ဂိုးစီ သရေကျနေခဲ့လို့ ပထမဆုံး ပယ်နယ်တီ အဆုံးအဖြတ်ခံယူခဲ့ရပြီး အနောက်ဂျာမနီအသင်းက (၅-၄)ဂိုးနဲ့ အနိုင်ရရှိခဲ့တယ်။ တခြား ဆီမီးဖိုင်နယ်ပွဲစဉ်မှာတော့ အီတလီအသင်းက ပိုလန်အသင်းကို (၂-၀)ဂိုးနဲ့ အနိုင်ယူပြီး ဗိုလ်လုပွဲအဆင့်ကို တက်ရောက်နိုင်ခဲ့တယ်။
ဗိုလ်လုပွဲမှာတော့ ပေါ်လိုရော့စီ ဦးဆောင်တဲ့ အီတလီတိုက်စစ်ကို အနောက်ဂျာမနီတို့ မထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့လို့ (၁-၄)ဂိုးနဲ့ ဂိုးပြတ်ရှုံးနိမ့်ခဲ့တယ်။ အခုပြိုင်ပွဲမှာ ချန်ပီယံဖြစ်ခဲ့တဲ့ အီတလီအသင်းကတော့ ဘရာဇီးလ်အသင်းအပြီး ကမ္ဘာ့ဖလားကို (၃)ကြိမ်မြောက် ရယူနိုင်တဲ့အသင်းအဖြစ် မှတ်တမ်းဝင်ခဲ့တယ်။ ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲ သမိုင်းကြောင်းတွေကို ပြိုင်ပွဲကျင်းပခဲ့တဲ့ နှစ်အလိုက် အပိုင်းဖြင့် နေ့စဉ်ဖော်ပြပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အပိုင်း (၁၃)ကို နောက်ရက်မှာ ဆက်လက်ဖော်ပြပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ် . . .
၁၉၈၂ ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲ မှတ်တမ်းအကျဉ်း
Host Country – Spain
Dates – 13 June – 11 July (29 days)
Teams – 24 (from6confederations)
Venue(s) – 17 (in 14 host cities)
Champions – Italy (3rd title)
Runners-Up – West Germany
Third Place – Poland
Fourth Place – France
Goals Scored – 146 (2.81 per match)
Attendance – 2,109,723 (40,572 per match)
Top Scorer(s) – Paolo Rossi (Italy) –6goals
Best Player – Paolo Rossi (Italy)
Best Young Player – Manuel Amoros (France)
Photo:Welcome2018, Sportsnet, eurosport.fr
ကမ်ဘာ့ဖလားပွိုငျပှဲ သမိုငျးကွောငျးမြား အပိုငျး (၁၂)
အိမျရှငျအဖွဈ လကျခံကငျြးပခှငျ့ကို စပိနျနိုငျငံက ရရှိခဲ့ပွီး နိုငျငံတဈဝှမျးရှိ ကှငျးပေါငျး (၁၇)ကှငျးမှာ ကငျြးပပွုလုပျခဲ့လို့ ကမ်ဘာ့ဖလား သမိုငျးတဈလြှောကျ ကှငျးအမြားဆုံး ကငျြးပပွုလုပျတဲ့ ပွိုငျပှဲအဖွဈ မှတျတမျးဝငျခဲ့ပါတယျ။ ခွစေဈပှဲကို နိုငျငံပေါငျး (၁၀၉)နိုငျငံ ဝငျရောကျယှဉျပွိုငျခဲ့ပွီး ပွိုငျပှဲဝငျ အသငျးအရအေတှကျကိုလညျး (၁၆)သငျးကနေ (၂၄)သငျးကို ပွောငျးလဲကငျြးပခဲ့တယျ။ အကွိုဗိုလျလုပှဲနဲ့ ဗိုလျလုပှဲအဆငျ့တှမှော ပယျနယျတီစနဈ စတငျကငျြ့သုံးဖို့ ဆုံးဖွတျခဲ့တဲ့ ပွိုငျပှဲဖွဈခဲ့ပွီး အနောကျဂြာမနီအသငျးနဲ့ ပွငျသဈအသငျးတို့ရဲ့ ဆီမီးဖိုငျနယျပှဲစဉျမှာ အခြိနျပို ပွီးဆုံးခြိနျအထိ (၃-၃)ဂိုးစီ သရကေနြခေဲ့လို့ ပထမဆုံး ပယျနယျတီ အဆုံးအဖွတျခံယူခဲ့ရပွီး အနောကျဂြာမနီအသငျးက (၅-၄)ဂိုးနဲ့ အနိုငျရရှိခဲ့တယျ။ တခွား ဆီမီးဖိုငျနယျပှဲစဉျမှာတော့ အီတလီအသငျးက ပိုလနျအသငျးကို (၂-ဝ)ဂိုးနဲ့ အနိုငျယူပွီး ဗိုလျလုပှဲအဆငျ့ကို တကျရောကျနိုငျခဲ့တယျ။
ဗိုလျလုပှဲမှာတော့ ပျေါလိုရော့စီ ဦးဆောငျတဲ့ အီတလီတိုကျစဈကို အနောကျဂြာမနီတို့ မထိနျးခြုပျနိုငျခဲ့လို့ (၁-၄)ဂိုးနဲ့ ဂိုးပွတျရှုံးနိမျ့ခဲ့တယျ။ အခုပွိုငျပှဲမှာ ခနျြပီယံဖွဈခဲ့တဲ့ အီတလီအသငျးကတော့ ဘရာဇီးလျအသငျးအပွီး ကမ်ဘာ့ဖလားကို (၃)ကွိမျမွောကျ ရယူနိုငျတဲ့အသငျးအဖွဈ မှတျတမျးဝငျခဲ့တယျ။ ကမ်ဘာ့ဖလားပွိုငျပှဲ သမိုငျးကွောငျးတှကေို ပွိုငျပှဲကငျြးပခဲ့တဲ့ နှဈအလိုကျ အပိုငျးဖွငျ့ နစေ့ဉျဖျောပွပေးသှားမှာ ဖွဈပါတယျ။ အပိုငျး (၁၃)ကို နောကျရကျမှာ ဆကျလကျဖျောပွပေးသှားမှာ ဖွဈပါတယျ . . .
၁၉၈၂ ကမ်ဘာ့ဖလားပွိုငျပှဲ မှတျတမျးအကဉျြး